रअको पुस्तक इन्साइड नेपाल
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री भन्दा शक्तिशाली मानिएको रअका स्पेशल डाइरेक्टरको स्पेशल पुस्तक इन्साइड नेपाल पुस्तक प्रकाशित भएको छ । नेपालबाट राजतन्त्र हटाउन रअले के के ग¥यो भन्नेमात्र होइन, अन्तिममा प्रचण्डलाई हतियार बनाएर राजतन्त्र सिध्याएको कुरा पनि यस पुस्तकमा छ, लेखकले यो पुस्तक सत्य घटनामा आधारित भनेका छन् ।
पुस्तकमा लेखक अमर भुषणले राजतन्त्रलाई साइजमा ल्याउन र नेपालमा भारतीय प्रभाव स्थापित गर्न ०४६ सालदेखि प्रयत्न गरेको, त्यसपछि माओवादी आन्दोलन चर्काएको, माओवादीलाई साधनस्रोत र संरक्षण दिएकामात्र होइन, राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाउँदै गणतन्त्रमा जाने नीति अख्तियार गरेर सफलता हासिल गरेको सम्मका इतिबृतान्त छ ।
यस प्रसङ्गमा माओवादी नेता कमल अर्याललाई जोगबनीमा भेटेको, विराटनगरमा भेट नविकरण गरेको, आर्थिक सहयोग दिएको र राजतन्त्र अन्त गर्ने सहमति भएपछि कूटनीतिक सक्रियता बढाएको पनि उल्लेख छ ।
ती कमल अर्याल नै प्रचण्ड हुन् त ? यसको जवाफ माओवादीका शीर्ष नेताहरुले नै देलान बिस्तारै । अमर भूषणका अनुसार उनका पुस्तकका मुख्य पात्रलाई सहजै चिन्न सकिन्छ ।
एसडी मुनीले पनि नेपालका बारेमा पुस्तक लेखेका छन् । भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले पनि पुस्तक लेखेका छन् र तिनले पुस्तक र अलजजिरा टीभीबाट माओवादीलाई साथमा लिएर नेपालको परिवर्तन गराएको फुइँकी हाँकेका छन् । स्मरणीय के पनि छ भने मुनीका अनुसार प्रचण्ड र बाबुरामले भारतसँग सौहाद्र हुनेछन्, भारतको हित विपरित जानेछैनन् ।
शायद दिल्लीले गराएको १२ बुँदे सहमति त्यसैको प्रतिफल थियो । त्यसपछि नेपालमा माओवादीलाई एमालेसरहको टिके हैसियत प्राप्त भयो । यतिमात्र होइन, राजाको अधिकार कटौति गर्दै धर्मनिरपेक्षता र संविधानसभामा जाने निर्णय भयो ।
अन्ततः २०६५ साल जेठ १५ गते भारतले छानेको विश्वासपात्र तर चुनाव हारेका कांग्रेसी कृष्णप्रसाद सिटौलालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गणतन्त्र कार्याँन्वयनको प्रस्ताव पठाइयो र त्यो प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । यति गर्नका लागि हटलाइनमा थिए रअका हर्मित, शिवशंकर मुखर्जी, केभी राजन, श्यामशरणहरु । जसरी महाकाली सन्धि पास भयो र तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले कानमा मीठो संगीत बजेजस्तो लाग्यो भनेका थिए, गणतन्त्रको प्रस्ताव पास हुँदा तत्कालीन कांग्रेस आईले गोप्य भोजकै आयोजना गरेको थियो । भारतीय दूतावासमा भोज चलेको थियो ।
इनसाइट नेपाल पुस्तकले नेपालमा राजनीतिभित्र कूटनीतिक षडयन्त्र कतिसम्म हावी छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
जनता कति सोझा छन्, केही बुझ्दैनन्, गोयवल्स शैलीमा निरंकूशता भनेको राजतन्त्र हो, राजतन्त्र हटाए सबै ठिक हुन्छ, जनताको राज चल्छ भनेर भ्रम छर्दै जनआन्दोलनको बिगुल फुकियो । पातलो जनआन्दोलनमा जब माओवादी मिसियो, त्यो आँधी, टन्र्याडो नै बन्यो र बारा र पर्सालाई ध्वस्त पारेझैं राजतन्त्र नै सखाप परेर परिवर्तन आयो ।
माओवादीसहितका नेताहरुलाई सत्ता चाहिएको थियो, पाए । न्यायका लागि त्यसपछि बेवास्ता हुनथाल्यो, अहिले पनि न्याय होइन, शक्तिकै प्रदर्शन भइरहेछ । एकजनाले लेखेका थिए– १७ हजार मार्नेले पीडितले न्याय पाउनु पर्दैन ? बाबुरामको जवाफ थियो– १७ हजार १ हुनपर्ने रहेछ । अर्थात मनसिकता उही छ ।
टीभी सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेका पक्षमा जुन जनताको भीड देखियो, त्यसको अर्थ जनतामा व्यापक असन्तुष्टि छ । जनता मौन थिए, मौन छन्, मौनता आँधी अघिको मौनता लाग्दैछ ।
सवाल जनतालाई भ्रमित पारेर,जनताप्रति जवाफदेहीता नलिने प्रवृत्ति र परिवर्तन तथा सत्तामा विदेशीको लगानी र प्रभाव कतिसम्म बढेको छ भन्ने उदाहरण बनेको छ अमर भूषणको यो इनसाइड नेपाल ।
के नेपालको राजनीति भनेको विदेशी घूसपैठमा रमाउने जमातको ठेक्का बनेकै हो त ? मधेसवादी खुल्लमखुल्ला विहार पुगेर जी हजुरी गर्छन्, अहिले दिल्ली गुहारेर संविधानको संशोधन माँगिरहेका छन् । दिल्ली नेपाललाई फिजीको मार्गबाट सिक्किम बनाउने अर्को योजनामा लागेको छ ।
पश्चिमाहरुको पनि व्यापक उपस्थिति र लगानी बढेको छ । उनीहरु चीनलाई कमजोर पार्न नेपाली माटोलाई मेसिनगन बनाउने प्लान्ट निर्माण गर्दैछन् । समस्या नेपाली सत्ता र संसदमा छ, जहाँ नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका बारेमा सतही चिन्ता गरिन्छ र भित्रभित्र उनीहरुकै षडयन्त्रका हिस्सा बन्न लालायित देखिन्छन् ।